Dahabshiil oo dacwad u gudbisay madaxda ugu sareeyo Telefishinka Aljazeera iyo go’aan soo baxay | Hohad News
Dahabshiil oo dacwad u gudbisay madaxda ugu sareeyo Telefishinka Aljazeera iyo go’aan soo baxay
Sarkaal ka tirsan Shirkadda Dahabshiil Group ayaa sheegay inay Madaxda TV-ga Aljazeera ee xaruntiisu tahay magaalada Doha ee Dalka Qatar ay garwaaqsadeen inay barahooda Bulshadda ee qeybtooda Laanta Afka Carabiga ee Aljazeera ka saaraan Warbixintaas lidi ku ahayd Shirkadda Dahabshiil, ku eedeynatsat in ku lug lahayd heshiiskii Shirkadda DP World ee dekadda Berbera.
Dahabshiil ayaa sheegtay in Maamulka Dahabshiil qoraal cabasho ah u qoreen Maamulka Sare ee Telefishinka Al-jaziira oo ku aadan Barnaamij bishan March 17-dii laga sii daayey Qeybta Craabiga ee Telefishinka, kaasoo loogu magac daray “Almasaafa Sifrr”, oo laga diyaariyey Hardanka Dekeddaha ee ka socda Geeska Afrika.
Qeybtii ku saabsaneyd Dahabshiil ayaa laga saaray warbixin Barnaamijkaasi ku jirtay ee ay ka dacwootay Shirkadda Dahabshiil, iyadoo Shirkadda Dahabshiil ayaa hore u soo saratay qoraal ay ku beenisay xogaha ku soo arooray Barnaamijka loogu magac daray “Almasaafa Sifrr” ee ay soo jeedisay weriyaha ka tirsan telefishanka Aljazeera ee Hinda Hilbawi.
Qoraalka Dahabshiil u dirtay Maamulka Telefishinka Aljazeera waxaa lagu xusay in baahinta Barnaamijkaasi xambaarsanaa Eedeymo laga been abuuray, kuwaasoo gebi ahaan ahaa Sharaf-dil iyo weerar ku shaa shirkadda ganacsi oo lagu eedeeyay ku lug lahaanshaha arrimo Siyaasadeed oo u muuqda kuwo ay dabada ka riixayso arrimo la xiriira Siyaasad degaameed (Geopolitical reasons).
Qoraalka Dahabshiil waxaa lagu muujiyey inaysan Aljazeera siinin Dahabshiil xuquuda jawaabta iyo fal-celinta ka hor intaysan Aljazeera baahinin Barnaamijkaasi. waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay haddii ay Aljazeera telefoonka kula soo xiriiri lahaayeen Dahabshiil in laga fogaan lahaa Qaladaadka iyo Been Abuurka badan ee ku jiray Warbixintaasi
Dahabshiil ayaa sheegtay inay tahay shirkad Ganacsi oo Caalami ah oo si gaar loo leeyhaay, oo u adeegto Bulshadda Caalamka, isla markaana aan ku lug lahayn Siyaasado Dowladeed ama Kooxeysi Siyaasadeed.